ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုအတွက်ဆုတောင်းပါ။ ? တစ် ဦး ကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပြုမီ။
ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုသသူဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အားခမည်းတော်ထံပေးအပ်ရန်တောင်းဆိုသည့်အရာမရှိ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ချန်ထားမည်။
1.2 ဆွေမျိုးတစ် ဦး စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဆုတောင်းပဌနာ
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းမပြုမီ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုမပြုမီနှင့်နာကျင်မှုများရှိသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည်တိုးပွားနေစဉ်ဆုတောင်းခြင်းသည်အပျက်သဘောအတွေးများအားလုံးကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေသည်။
ငါတို့လုပ်ရမည် ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်လော့ သူကကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုအော်ဟစ်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြီးမြတ်။ လျှို့ဝှက်ထားသည့်အရာများကိုသင်ပေးလိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာသာပေးသောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်နေသည်ကိုသိခြင်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်၎င်းသည်သူဖြစ်သည်ကိုသိခြင်း၏ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည် ငါတို့ထဲမှာအလုပ်လုပ်
ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ဖခင်အားသူ၏နာမဖြင့်မေးမြန်းရန်ဖိတ်ခေါ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များသည်ယေရှု၏နာမ၌အမြဲရှိနေပြီး၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ ငါတို့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ။ ၊.
ခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူမီစီရင်ချက်ချခြင်းသည်ဆရာဝန်၊ ကျန်းမာရေးစင်တာ၊ ရက်စွဲများနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်မည့်နည်းလမ်းများကဲ့သို့ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သည်။
ဆွေမျိုးတစ် ဦး စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဆုတောင်းပဌနာ
အကယ်၍ ခန်းမထဲ ၀ င်ရန်နီးစပ်သူသည်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ဖြစ်ပါက၊ ဆုတောင်းပဌနာ ၎င်းကိုလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးလုပ်ဆောင်ပြီးထိန်းသိမ်းထားရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုမီကောင်းမွန်သောစွမ်းအင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစု ၀ င်များအားမည်သို့ပို့ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအပြုသဘောဆောင်ပြီးတက်ကြွသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကူညီရန်အထောက်အကူပြုမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အတွက်အပျက်သဘောသဘောထားသို့မဟုတ်ဘုရားသခင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုသံသယ ၀ င်ရန်ဆုတောင်း။ မရပါ။ သို့သော်စစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီနှင့်အရာရာအဆုံး၌မိသားစု ၀ င်အားခွန်အား၊ အားပေးမှု၊ ဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အော်ပရေးရှင်းခန်း၌ကျွန်ုပ်တို့အားစောင့်ရှောက်ရန်ကောင်းကင်တမန်များကိုစေလွှတ်ရန်ဘုရားသခင်အားတောင်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လိုသောနတ်ဆိုးများကိုချည်နှောင်ရန်ဘုရားသခင်အားတောင်းဆိုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရွေးလုပ်နိုင်သောခိုင်လုံသောတောင်းဆိုမှုနှစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုကောင်းမွန်သောစွမ်းအင်များဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်သို့မဟုတ်ဤမိသားစုဝင်တစ် ဦး သို့ ၀ င်ရန်နီးစပ်သည့်မိသားစုဝင်၊ မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်အသိအကျွမ်းတို့၏စကားလုံးများပြည့်စုံစေရန်ကျွန်ုပ်တို့မြင်လိုသောကောင်းသောအရာအားလုံးကိုသင်နှင့်အတူသင်ကြားနိုင်အောင်လည်းအရေးကြီးသည်။
သင်၏နှလုံးသားကိုယုံကြည်လျှင်ဘုရားသခင်သည်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအချိန်၌သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။ ဆုတောင်းခြင်းများသည်အရာရာတိုင်းတွင်အောင်မြင်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြသည် el Mundo.